शब्दकोश: यस्तो एउटा सिर्जनात्मक विवाह...
विविधताले भरिएको हाम्रो नेपाली समाज । थरीथरी जातजाति । थरीथरी रिवाज र संस्कार । कतिपय नराम्रो संस्कार र कुरीति पनि जिउँदो-जाग्दो भएर हामीमाझमै बसेका छन्, त्यत्तिकै राम्रा थितिहरू पनि कति ओझेलमा परेका छन् त कति नासिएर गइसके । जन्मसंस्कारदेखि मृत्युसंस्कारसम्ममा मानवसमाजको आफ्नै निश्‍चित मापदण्ड रहिआएको छ । त्यसमध्ये जीवनमा गर्नैपर्ने कर्मकाण्डमा विवाहलाई लिने गरिन्छ । वैवाहिक संस्कार हाम्रो मुलुकमा जातजातिपिच्छे फरक किसिमबाट पूरा गरिन्छ । परम्परागत प्रचलन पनि आधुनिक समयमा आएर थोरै तोडमरोड हुँदै मनाइन थालिएको छ ।
चलनचल्तीको वैवाहिक उत्सवको परम्परालाई तोडेर रचनात्मक तवरले लगनगाँठो गाँस्ने जोडीहरू पछिल्लो समयमा निकै देखिएका छन् । यस्तै सिर्जनात्मक विवाह गर्ने जोडीमा पछिल्लो उदाहरण बनेका छन् शनिश्चरे मोरङका घनेन्द्र ओझा र छत्रेदेउराली धादिङकी राधा कँडेल । दुवैजना गजल विधामा समर्पित साहित्यप्रेमी । जीवनयात्रा गजलमय बनाइराख्न दुवै उत्तिकै रसिक रहँदै आएका छन् । त्यसैले आफ्नो विवाहको प्रीतिभोजमा मङ्सिर २३ गते (डिसेम्बर ८) सोमबार उनीहरूले आफ्नो संयुक्त गजलसङ्ग्रहको विमोचन गरे- 'बाटो अझै छ बाँकी' । कृतिमा दुवैको छानिएका राम्रा गजलसिर्जना समेटिएका छन् । ठूलो सङ्ख्यामा उपस्थित साहित्यप्रेमी तथा आफन्तको बीचमा दुवैले किताबमार्फत साथसाथ जीवनको साउती गरे । चार वर्ष लामो प्रेमसम्बन्ध वैवाहिक नातामा त गाँसियो, यही साइतमा अब उनीहरू भन्दैछन् - सहयात्राको बाटो अझै बाँकी छ है, ल सँगै हिँडौँ... ।
विवाह - दुई आत्माको मिलन । दुई जना भएपछि जस्तोसुकै कुरा पनि समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सोचले धेरैले विवाह गर्ने गर्दछन् । कताकता यो अघोषित सम्झौताको सामाजिक रिवाज जस्तो लाग्छ । अर्थात् अर्कोप्रति भर पर्दै अस्तित्त्वलाई स्विकार्नु । सहज जीवनयापनमा एकअर्काको साथ खोज्दै सामाजिक चक्रलाई निरन्तरता दिन वैवाहिक जोडीहरू अग्रसर हुन्छन् । यसका साथै, परिवारबीचको आत्मिक सम्बन्धकालागि पनि विवाहलाई लिइन्छ । विवाहले सम्बन्ध विस्तारमा धेरै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । तर यही विवाहलाई कसैले सम्पत्ति सङ्कलन गर्ने तथा आफ्नो सम्पत्ति प्रदर्शन गर्ने माध्यमका रूपमा पनि लिएका छन् । छोरा-छोरीको विवाह धुमधामले गरेर समाजमा आफ्नो 'ल्याकत' साबित गर्ने होडबाजी पहिलेदेखि नै चलिआएको छ । हुनेखानेले त सम्पत्तिमार्फत शक्तिप्रदर्शन गर्छन्, केही नहुनेले समेत ऋणपान गरेरै भए पनि 'महँगो' विवाह गराउने देखासिकी प्रवृत्ति हाम्रो समाजमा चौपट्टै मौलाएको छ । यस्तो कुसंस्कार हिजोआज कमजोर मानसिकताका मानिसहरूको खेती भएको छ ।
विवाहमा लिएको ऋण तिर्न नसकेर जिन्दगीभरि अरुकोमा काम गर्न बसेका धेरै उदाहरण नेपाली समाजमा अझै पनि छन् । तर अहिले आएर त्यो परम्परामा निकै उतारचढाव आएको छ । सम्पत्तिको प्रदर्शनभन्दा पनि कसरी सिर्जनात्मक अनि सबैलाई सजिलो हुने खालको विवाह गर्ने भन्ने भावनाको पनि विकास भैरहेको छ । यस्तो सोच विशेषतः आजका शिक्षित युवामा झ्याङ्गिदै गएको छ । त्यसैले विवाहका नयाँ-नयाँ शैली अहिले आएर देखिन थालेको छ । सामाजिक चेतना भएका केही मानिसहरूले सुरू गरेका यस्ता विवाह अरूकालागि पनि निकै प्रेरणादायी बनेका छन् ।
यस्ता सिर्जनशील जोडीहरूमा कोही कुनै कल्याणकारी संस्थालाई सहयोग गरेर विवाह गर्दैछन् । कोही प्रीतिभोज नगरी त्यसमा खर्च हुने पैसा सामाजिक समूहलाई दान दिएर सादा तर विशिष्ट मूल्यको विवाह गर्दैछन् । कोही सार्वजनिक चौकमा खुला रूपमा मञ्चमा भाषण गर्दै समाजका गन्यमान्य सदस्यहरूसँग आशीर्वाद लिएर विवाह गरिरहेका छन् । कोही आफ्नो विवाहको लागि घरमा लगाइने रङलाई चोक र चौतारोमा लगाएर समाज सेवायुक्त विवाह गरिरहेका छन् । कोही विवाहमा आशीर्वाद दिन आएका मानिसलाई खुवाइने प्रीतिभोज कुनै अनाथालय वा वृद्धाश्रमका बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरूलाई खुवाएर आत्मसन्तुष्टि लिइरहेका छन् । यसरी सामाजिक जिम्मेवारीसँगै आफ्नो पारिवारिक जीवनलाई खुसियाली रूप दिने सिर्जनशील सोचमा आज कुनै कमी छैन ।
मानवीय सम्बन्धमा इन्धनको काम गर्ने आत्मिक प्रेमदेखि साहित्यप्रेमसम्मलाई एउटै बोली 'बाटो अझै छ बाँकी' गजलकिताबबाट पुष्टि गर्ने राधा र घनेन्द्रजस्तै जोडीले समाजमा नयाँ रङ थप्दैछन् । यो रङ सामाजिक शक्तिप्रदर्शनभन्दा बाहिरको रङ त हो नै, यही किरिङमिरिङ जेलिएको समाजलाई रचनात्मकताको छाप छोड्ने रङ पनि हो । छोराको विवाहमा आशीर्वाद दिन पूर्वी नेपालको इटहरीदेखि आउनुभएका घनेन्द्रका आमा-बुबा नै समारोहका प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो । सबैलाई सम्बोधन गर्दै उहाँहरूले संयुक्त रुपमा उक्त संयुक्त गजलसङ्ग्रहको विमोचन गर्नुभयो । गजल विधामा लामो समयदेखि कलम चलाइरहेका रवि प्राञ्जल, देवी नेपाल जस्ता सर्जकले नव वर-वधुलाई आशीर्वाद र शुभ कामना दिँदै उनीहरूको सिर्जनात्मक कामको सराहना पनि गर्नुभयो ।
ती सिर्जनशील दुलहा-दुलहीलाई नयाँ शैलीको विवाहको लागि बधाईसहित सफल दाम्पत्य जीवनको लागि हाम्रो पनि मुरी मुरी शुभ कामना है ।
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, December 12, 2008
दीपक जडित December 12, 2008
दुबैलाई बैबाहिक जीवनको सफलताको शुभकामना ।
उजेली December 13, 2008
यस्तो उदाहरणीय विवाह गर्नुभएका जोडिको जीवन पनि साँच्चै नै अरूका लागि उदाहरणीय बन्न सकोस् !!!!
बेदनाथ पुलामी ( उमेश ) December 15, 2008
यो त उदाहरणीय मात्र नभएर प्रभाबकारी कदम पनी मान्नु पर्छ । यी नव जोडीलाइ मेरो तर्फ बाट पनी सफल दाम्पत्य जीवनको शुभ - कामना छ ।
सबैले यसरिनै रचनात्मक तरिका अपनाए कति
सृजनशिल समाज स्थापित हुने थियो होला है !
सफल वैवाहिक जीवनको लागि हार्दिक शुभकामना!
अविनाशी December 29, 2008
एकदम राम्रो ।
तर अनिता तिम्ले त झन्डै बिर्सेको हैन र ?